One Zaab | မြန်မာ စားသောက်ဆိုင် လမျးညှနျ Myanmar Restaurant Guide Drecome Eat and Health
One Zaab | Lanmadaw
One Zaab စားသောက်ဆိုင် သည် နိုဝင်ဘာလ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ကတည်းက ဖွင့်လှစ် ခဲ့သော ဆိုင်တစ်ဆိုင် ဖြစ်ပါသည်။ ဆိုင်ကတော့ အမှတ် ၁၂၄ ၊ ဘုန်းကြီးလမ်း ၊ လမ်းမတော် မြို့နယ် တွင် တည်ရှိပါသည်။ ဆိုင်ရဲ့ ဖွင့်ချိန် ပိတ်ချိန် လေးတွေကတော့ နေ့လည် ၁၂ နာရီ မှ စတင် ဖွင့်လှစ်ကာ ည ၉ နာရီ ထိ ဖြစ်ပါသည်။ ဆိုင်က ပိတ်ရက် မရှိ နေ့စဉ် ဖွင့်လှစ် ပါသည်။ ဆိုင်ရဲ့ အဓိက ရရှိနိုင်တဲ့ မီးနူး တွေကတော့ ထိုင်းအစားအစာ ၊ ထမင်းနှင့် ဟင်းများ ၊ ပင်လယ်စာ များကို ရရှိ နိုင်ပါသည်။ ထိုင်း အစားအစာ များကို ရှမ်းစတိုင် နှင့် ပေါင်းစပ် ဖန်တီး ချက်ပြုတ်ထားသော ကြောင့် အရသာ ကောင်းမွန်ပြီး စားသုံးသူများ၏ ကြိုက်နှစ်သက်မှု ကို အပြည့်အ၀ ရရှိထားတဲ့ ဆိုင်တစ်ဆိုင် ဖြစ်ပါသည်။ ဆိုင်တွင် အရသာ ရှိသော လတ်ဆတ်သောပင်လယ်စာများ၊ ရွှေရင်အေး၊ ရေခဲသုပ်နှင့် အအေး အမျိုးမျိုး တို့ကိုလည်း သုံးဆောင်နိင်ပါသည်။ ဆိုင်ရဲ့ လူကြိုက် အများဆုံးနှင့် အရောင်းရဆုံး အစားအသောက် တွေကတော့ ပြောင်းဖူးထောင်းသုပ် ၊ ငါးကင် ၊ ၀က်ဂုတ်သားကင် ၊ ပလားတူးငါးမုန့်တီ ၊ မားမားမူယောထောင်း ၊ နှင့် ဆားဘဲဥသင်္ဘောသီးထောင်း တို့ ဖြစ်ပါသည်။ ပျှမ်းမျှ ဈေးနှုန်း အနေနှင့် တစ်ယောက်ကို နေ့လည်စာ နှင့် ညစာ တို့တွင် ၁၀၀၀ ကျပ်မှ ၂၅၀၀၀ ကျပ်ထိ ကျသင့်နိုင်ပြီး ဆိုင်တွင် ဧည့်သည် အယောက် ၆၀ခန့် တစ်ချိန် တည်းတွင် သုံးဆောင် နိုင်ပါသည်။ ဆိုင်အပြင်အဆင် ကတော့ စတိုင်ကျ ခေတ်မှီ လှပကာ ရိုးရှင်းပြီး သန့်ရှင်း သပ်ရပ်ကာ စတိုင်ကျ ခေတ်မှီ လှပတဲ့ setting များကို အသုံးပြု ထားပြီး ဆိုင်အတွင်းတွင် လည်း အအေးခန်း တပ်ဆင် ထားပါသည်။ ဒါ့အပြင် ဈေးနှုန်းချိုသာပြီး ဝန်ထမ်းများ၏ ဝန်ဆောင်မှု မှာလည်း အထူး ကောင်းမွန်လှပါသည်။
ထမင်း နှင့်ဟင်းလျာ | တုံယမ်း ဟင်းချို | သစ်သီးဖျော်ရည် | ပင်လယ်စာ | ထမင်းကြော်
12:00 PM - 09:00 PM ( ဘာမှမရှိပါ )
No. 124, Phone Gyi Street, Lanmadaw Tsp., Yangon.
အနီးအနား စံပြ မှတ်တိုင်3မိနစ် လမ်းလျှောက်လျှင် ကြာချိန်
မြန်မာအစားစာ, တရုတ် အစားစာ, ကိုရီးယား အစားစာ